विचार « Lalitpur Khabar
डा. रवीन्द्र पाण्डे अहिले नेपालमा पनि कोरोनाको खोप थालिएको छ । नेपालमा १२ लाख ८१ हजारले लगाए कोरोनाविरुद्धको पूर्णखोप लगाइसकेका छन् । नेपालमा अमेरिकाको जोन्सन खोप र चीनको भेरोसिल खोप
वसन्ती थापा कोरोना माहामारीको विषम परिस्थितीमा फ्रन्टलाइनमा रहेर कोरोना संक्रमितहरुको सेवा गर्ने सबै स्वाथ्यकर्मीहरुलाई मेरो सलाम छ । संसारलाई नै त्रसित बनाइरहेको यो भाइरसबाट कोही पनि अछुलो छैन । हामी
श्रीराम कासिछवा विश्वव्यापी रुपमा वातावरण प्रदूषण विकराल समस्याको रुपमा बन्दै गइरहेको छ । तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि, कृषिमा अत्यधिक रसायनिक मलको प्रयोग, विभिन्न किसिमका सवारीसाधनबाट निस्कने ग्यास, उद्योग तथा कल कारखानाबाट
सुदिप ढकाल यस वर्षको विश्व वातावरण दिवस पनि आइपुगेको छ । जुन महिनाको ५ तारिखमा विश्वव्यापी मनाइने रूपमा यो दिवसमा यसपालिको नारा भने ‘पर्यावरणीय पुर्नस्थापना’ भन्ने छ । आलेख शुरु
कोरोना लागे के गर्ने ?
ललितपुर खबर ७ जेठ ०७८, ललितपुर । आजकल टाल समाज जहाँ त्यही कोरोना स.क्रमितहरु फेला पर्न थालेका छन् । जो कोहीलाई कोरोना संक्रमणको त्रास छ । यो स्वभाविक पनि
जगदीश उपाध्याय अहिले ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्यले आकाश छोएको छ । एक दुई महिनाको छोटो अवधिमै ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य झण्डै दोव्वरले वढेको छ । प्रतिकिलो दुई सय ५० रुपैयाँंमा
नेपाली शिक्षकहरुमा नमस्कार !
गोपाल सञ्जेल आदरणीय व्यक्तिहरुलाई नमस्कार गर्नु पूर्वीय सभ्यता नै हो । नमस्कार गर्दा दुवै हात जोडेर मुटुमा हात राखी शिर पूरै निहुराउनुपर्छ । यसलाई साष्टाङग दण्डवत् भनिन्छ । गुरु त
‘पाटनका पर्यटन व्यावसायी निराश छौं’
१५ फागुन ०७७,मंगलबजार । एक बर्षअघि ललितपुरको मंगलबजारस्थित पाटन दरवारपरिसरमा लस्करै क्युरियो सामान बेच्ने व्यापारी बस्थे । पर्यटकहरुको भिडभाड हुने पाटनमा नेपाली कला संस्कृती झल्कने धेरै सामान बिक्रि हुन्थ्यो ।
२५ माघ ०७७, ललितपुर । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आजकल नेपाली राजनीतिको परिधिभित्र चर्चामा छन् । अस्थिर राजनीतिको वरिपरि घुम्ने प्रचण्डको राजनीतिको चर्चा नेकपा एकतासँगै चुलिएको थियो । झण्डै
आनन्दवनका डाक्टरहरुसँग कोरोना खोपको अनुभव
नेपाल सरकारले बुधबारबाट देशभर कोरोना खोप अभियान शुरु गरेको छ । भारत सरकारको अनुदानमा ल्याइएको नामको यो कारोना खोप आगामी आइतबारसम्म ५ दिन लगाउने कार्यक्रम छ । २ पल्ट लगाउनु